Maxmuud Sangub - Wikipedia
Maxmuud Sangub Waa abwaan Soomaliyeed oo aad iyo aad u caana.
Waa abwaan soomaaliyeed oo leh halabuur dhinacyo badan leh. Taariikh-Faneedka Abwaan Maxamuud C/laahi Ciise “Sangub” Maxamuud Cabdilaahi Ciise (Sangub), wuxuu ka mid yahay abwaanada ugu horeeya hal-abuurka Soomaalida, waana nin dad badani ku xusuustaan kaalinta uu ka qaatay Kobcinta Suugaanta Soomaaliyeed, hase yeeshee, waxaa dhici karta in dad badan oo maanta nooli aanay isu aqoon Sangub iyo Fankiisa. Bal aanu isku dayno in aynu Wax ka sheegno, taariikh-faneedka Sangub: Maxamuud Cabdillaahi Ciise (Sangub), wuxuu ku dhashay baadiyaha magaalada dhagaxbuur dhulka Is-maamulka deegaanka Soomaalida Itoobiya, sannadkii 1944, halkaas oo uu ku barbaaray. Sangub markii da’diisu shan jir gaartay ayuu ku bilaabmay u hilowga fanku. Dhalinyaranimadiisii, wuxuu ku soo caan baxay ciyaaraha dhaqanka, gaar ahaan ciyaarta “Dhaantada” oo ah mid markuu gacanta u qaado aan cidina uga daba dabadii yeerin. Kasokow dhinaca Ciyaaraha dhaqanka Sangub, wuxuu ahaa gabayaa ka hida qaba qoysas kala duwan wada gabya, aabihii, abtiyaashii iyo walaalihii intuba way gabyi jireen. Wakhtigiii hore ma jirin waxbarasho Jaamacadeed, iskuuladuna dalka way ku yaraayeen, sidaa darteed sangub wuxuu ku dadaalay inuu barto quraanka ilaa uu quraankii dhammeeyey, xilligaasna waxyaabaha dhalinyaradu aad isugu taxalujin jirtay, waxaa ka mid ahaa gabayada. Sangub abtigii, wuxuu ahaa ninkii uu Timacadde ku hal qabsanayay ee uu lahaa; “Mudanihii Aflow iyo sidii Muxumed maw sheeg” Aflow, wuxuu ahaa, abtigii hooyadii la dhashay. “Masoolahayeey, Casoolahayeey, ciyaar-jinidaan aqaan” Inkasta oo Sangub sheegay in aanu ilaa hadda garanayn macnaha ererada Masoole iyo Casoole, haddana wuxuu kelmadahaa ka dhigtay, hal-qabsi naaxyid u noqotay heeshihiisa. Sangub, markii uu barbaar noqday ayuu ayuu yimi magaalada Hargeysa, sannadkii 1961, wuxuuna tegay Idaacadda Raadyow Hargeysa, halkaas oo imtixaan lagaga qaaday, Sangub isaga oo ka hadlaya sidii wax u dhaceen, ayuu yidhi: “Naxariistii Jano ilaahay ha siiyee, Ninkii la odhan jiray Huryo, ayaa yidhi; ‘Inankan haddii aad loo reer magaaleeyo, wax buu samayn karaa, markaa waa in laqaataa’.” Xaajji Cabdi Ayuub oo madax ka ahaa Raadiyow Hargeysa, ayaa codsigii ka ogolaaday, sidaana wuxuu kaga hawl-galay Raadiyaha oo uu ka qaban jiray, shaqo aan rasmi ahayn. “Sidaa darteed, Huryo ayaa sabab u ahaa in aan dhulkii ka imaado oo aan Fanka Soomaalida ku soo biiro,” ayuu yiri Sangub oo ka hadlayay cidii gacanta ku siisay inuu ku dhiirado, kana qayb-qaato Fanka. Ka dib markii uu ka helay shaqo-aan-rasmi ahayn magaalada hargaysa ayuu waxa uu u wareegay magaalada Muqdisho sannadkii 1961, halkaas oo uu imtixaan u u galay, isaga iyo 21 qof oo kale halkaasna uu isagu dhinaca gabayga uu ku guulaystay iyo shiikh akhriyey jiray Quraanka Kariimka, sidaas ayuuna kaga shaqo galay Idaacada Muqdisho; Waxaana imtixaanka ka qaaday Fuqi Buraale iyo Cismaan Kaahin iyo Cali Afyare. Sangub markii uu yimid magaalada Muqdihso waxaa yaab iyo dhabanahays ku noqotay sida gabdhaha magaalada ku nool ay u dhaqmaayaan, iyo sida ay ahaayeen gabdhihii uu baadiyaha ku yaqaanay; gabaygii ugu horeeyey uu ku galo imtixaankana waxa uu kaga hadlay sida dhaqanka magaalada iyo kan baadiyahu u kala duwan yahay, wuxuuna yidhi; Habluhu waagii hore waa tii, ay hadal yaraayeene Waayagii harraadkiyo dhibtiyo, hawsha kululaaye Wa kii lagu hawoon jirey intii, hadhac la ootaaye
Q: 2aad Qaybtii koowaad ee barnaamij Faneedka Abwaan Maxamuud C/laahi Ciise (Sangub), waxaynu wax kaga tilmaamay bilowgii taariikhda murtida iyo xikmadda Eebbe ku manaystay Abwaan Sangub. Qaybta labaad ee maantana, waxaanu wax kaga taataabanaynaa Riwaayadihii uu Abwaanku sameeyay sannadihii Toddobaatameeyadii. Abwaan Maxamuud C/laahi Ciise (Sangub), kuma koobna Mu’alifnimada oo keliya, balse waa gabayaa, wuxuuna leeyahay gabayo badan oo uu kaga hadlayo dhinacyada kala duwan, maadaama uu yaraantiisii ku soo barbaaray nolosha miyiga, wuxuu caan ku noqday Ciyaaraha dhaqanka, intaa waxa u dheer samaynta laxanka heesaha, samaynta Muusikada, iyo weliba metelaadda ama jilaanimada. Sannadkii 1970-tanaadkii ayuu sameeyay riwaayado jacayl ah oo ay ka mid ahaayeen, Riwaayado caan ka noqday guud ahaan dhulka Soomaalidu degto. Riwaayadaha kala ah; Qabrigii Jacaylka, Xuudbaa liqay Jacaylkii, iyo Xuskii Jacaylka, waxay noqdeen qaar qisooyinka iyo heesaha ay xambaarasanaayeen, si weyn u soo jiiteen indhaha Soomaali badan muddo dheer ku hadaaqi jiray, heesihii riwaayadahaa ku jiray. Haddii aynu wax yar ka xusno, waxaynu soo qaadan karnaa riwaayadii la odhan jiray “Qabrigii Jacaylka” oo waxay dadku is-weydiinayeen Jacaylka la’ aasayo, taas oo qof walba ku dedaalay bal sidii uu wax uga ogaan lahaa arrinta. Riwaayadaha kale ee Sangub sameeyay, waxaa ka mid ahaa “Xoriyo nin geyaa ha guursado,” “Gari ma kaa baxdaa, isuma qado iyo kuwo kale.” Xoriyo, waxay ahayd, riwaayad caan ah oo dadku si weyn uga daba dhacay, Inkasta oo abwaanku ujeeddada riwaayada ku tilmaamay mid wadani ah oo uu kaga hadlayay qadiyadda Soomaali Galbeed, haddana dadku waxay u macnaysteen wejiyo kala duwan. “Xoriyo, waxaan kaga jawaabayay gumaysigii iyo Nin Amxaar ah oo Buug ka qoray,” ayuu yidhi Sangub. Markii ay dadku daawadeen Xoriyo, waxay noqotay ujeedo badan oo qofba sidii uu isagu jeclaa, ayuu u macnaystay. Sangub oo wax laga weydiiyay sida uu u dareemay markii fikradiisii ay ka xoog badatay tii shacbigu qabeen, ayaa sheegay inuu isku dayay in aan la bedelin ujeeddadii uu ka lahaa, hase yeeshee wuxuu intaa ku daray inuu sidii ay rabeen u daayay; “Riwaayada Xoriyo, qofkastaa si gooni ah ayuu u fasirtay, dadkuna umay qaadan sidan ku waday. Maxkamaddaa dhegaha la’ ayaa la’I saaray, aniguna maadaama aan ka dhaadhicin kari waayay, siday u qaateen ayaan ugu daayay. Waxaa quman in wax laysweydiiyo oo qofkii riwaayada alifay lagu yidhaahdo, maxaad uga jeeday, balse aan wax la iska mala awaalin.” Sidaa waxa yidhi, Sangub oo ka hadlaya isfaham la’aanta dhextaalla abwaanka iyo bulshada guud ahaan. Riwaayada Xoriyo oo samaynteedu ku soo beegantay, wakhti ay in badan oo bulshada Soomaalida ka tirsani il gaar ah ku eegayeen, hab-dhaqanka Madaxdii Xukuumadii dawladii burburtay ee Soomaaliya, ayaa keentay in ay u macnaystaan sidii rabitaankeedu ahaa, halka qaar kalena ay u macnaysteen in ay ka hadlayso dawladnimada oo la leeyahay, cid kale ma geydo. Si kastaba ha ahaatee, waxay Xoriyo noqotay “Hadal ninna si u yidhi, ninna si u qaaday. Halku-dhigyadii riwaaydii xoriyo ee dadkana, sida weyn u soo jiitay, waxaa ka mid ahaa ereyadan: “In ay dunidu gabangaabsi tahay oo gabaxa oo liita, Wakhtigaa isgurayiyo ilaa shiidda lagu guuray oo ay galgalad tahay ayaan idin garwaaqsiine, Taariikhahan gabaabsiyay qarnigan galowgu sheegaayo, Gudcurkiyo cadceedan isqabsaday, hadalkan gaagaaban, cilmi falaggan guuree dayaxa guudka laga saaray, Gordane iyo surwadan kala durkee godobta sheegaaya, Guntane iyo bayaatkan isdhacaye geella ka qaaday, Gartan uu afyuubkii lahaa geli aqoon waayay, Xurrahan gudinta soofaystay ee gabadka dhiigaystay, Lamaanahan gucleeyay ee u tegay dirirta gowriira, Gaadhanahan ordaaya ee derderay guubiska hurdaaya.” Tixahan iyo kuwo kale oo badani, waxay noqdeen kuwo dhadhan u yeelay xoriyo oo ay soo bandhigideeda ka qayb-qaateen Fannaaniin badan oo ka mid ah, kuwa loogu jecel yahay markay noqoto heesaha iyo dhinaca maadaynta intaba. Maxamuud Cabdillaahi Ciise (Sangub), wuxuu si weyn uga soo horjeestay Maamulkii dawladii rayidka ahayd ee talada dalka uga horaysay Taliskii Siyaad Barre, oo isagu inqilaab Milateri talada dalka kagala wareegay. Heeso badan oo wakhtigaa uu tiriyay, ayuu si weyn ugu muujiyay fadhiidnimada maamulkaas, iyada oo uu ku tilmaamay mid aan habayaraatee waxqabadka lahayn, dadkiina khaladay. Heesaha uu wakhtigaa Sangub u tiriyay Xukuumadii uu Ra’iisal-wasaaraha ka ahaa Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal, waxaa ka mid ahaa; “Hurudooy hawaaraay,” “Gaasiray inaga yayna kala guraaya,” “Alla walalac beeneey,” “Waan arkaayo sheegi maayo,” “Xilka kaan u dhiibtaa iga dhuumanayoo dhexda caynku kaga go’ay.” Abwaan Sangub, fannaaniinta uu aadka u jeclaa, inta badana riwaayadihiisa wax ka meteli jiray waxaa ka mid ahaa, Fannaanka caanka ah Salaad Maxamed Shardi (Salaad derbi) iyo Saynab Cige Maxamed oo labaduba wax ka metelayay, Riwaayadihii Silsilada ahaa ee (Silsiladii Jacaylka), isaga oo abwaanku wax ka tlmaamaya jacaylkii uu u hayay fannaanka Salaad derbi, wuxuu yidhi; “Fannaaniin badan baan jeclaa, laakiin sida wiil aan dhalay waxaan u jeclaa Salaad derbi, waayo wuxuu ii ahaa Mukhlis, wuuna dedaal badnaa.”
Q: 3aad aybihii hore ee Taarrikh-faneedka Abwaan Sangub, waxaynu ku xusnay qaybo ka mid ah Badweynta murtiyeed ee Eebbe ku manaystay Abwaanka, gaar ahaan riwaayadihii uu sameeyay oo qaar ka mid ah aanu wax kga tilmaamay. Qormadeenan maantana, waxaynu ku soo qaadanaynaa doorkii uu Sangub ku lahaa, heesaha Waddaniga loo yaqaan. Inkasta oo uu Sangub si weyn uga soo horjeeday Maamulkii Rayidka ahaa oo uu Inqilaab Meletari Xukunka kagala wareegay 21 Oktoobar 1969, haddana wuxuu taageero weyn isla barbar taagay dawladii milateriga ahayd, isaga oo Maxamuud C/laahi arrintaa ka hadlaya, wuxuu yidhi: “Dawladii hore waan la-dagaalami jiray oo waxaan u arkayay wax khaldan, kadibna waxaa dhashay Kacaankii markaa aad baan u dheereeyay.” Marka laga tago heesaha Kal-gacalka ah iyo kuwa hogga-tusaalaynta ah, waxa kale oo uu qayb libaax ka qaatay samaynta heesaha Waddaniga ah oo uu maqaam sare ka gaadhay. Haddii aynu dhawr ka mid soo qaadano, waxaa tusaale inoogu filan Heesta caanka ah ee “Dhulka sow anigu ma lihi,, miyay dhimashadu iqoonta, miyaan dhiig baxay ka diiraa, shahiidku miyuu dhib-diidaa, dhulkayga miyaa la-rarayaa, baddayda miyaa la-dhurayaa, dhirtayda miyaa la-dhoofshaa, ninkii dhoof ku yimi bay geeridu dhibaysaa.” Inkasta oo ay heestani Waddani tahay oo sida uu sheegay abwaanku, loogu tala-galay in loogu digo dawladii Ruushka oo dhinaca Itoobiya u xaglisay markii uu socday dagaalkii dhexmaray Soomaaliya iyo Itoobiya sannadihii 1970-naadkii, haddana sideedii looma dayn, waxayna noqotay mid loo isticmaalay ujeedooyin badan oo dadka midba sidii uu jecelyahay u cabiro, gaar ahaan xilliyada ay jiraan iska horimaadyo iyo khilaafaad u dhexeeya laba ardaa ama laba qolo oo xataa isku ardaa keliya ahi. Falalka noocaas ah oo noqday, qaar si weyn ugu faafay dhammaan dhulka Soomaalidu degto. Abwaan Sangub oo dareenkiisa ka dhiibanaya, sida loo maydhaamay heestaa iyo kuwa kaleba, ayaa yidhi; “Markii Ruushku inaga soo saaray Itoobiya, ayaan aniga oo cadhaysan sameeyay afar heesood oo tani ka mid tahay, laakiin waa nasiib-darro in dadku arki waayan Xikmadaha qotoda dheer ee ay xambaarsan tahay, waana wax laga xumaado.” Heesaha kale ee Waddaniga ah, waxaa ka mid ah: “Dhiigayga waan gada-hayaa, galaas ayaan ku shubayaa,” “Wallee dheehooy dhaaxaad oloshaye, waa lagaa dhalin.” Abwaan Sangub, intii uu ku dhexjiray mihnadda Fanka, wuxuu soo barbaariyay Fannaaniin badan oo Caan ah oo ay ka mid yihiin; Cabdi Cali “Bacalwaan,” Cumar Rooraaye, Axmed Cali Cigaal, Axmed Mooge iyo Axmed Gacayte. Waxa kale oo uu qayb ka qaatay hablaha fannaaniinta, gaar ahaan kooxdii ciyaaraha dhaqanka oo uu soo saaray gabdho badan oo ay mid yihiin; Shamso Cumar, Caasha Walasaqo, Safiya Geelle, Fayruus Sh. Daahir, Khadiija Maxamuud “Qalanjo,” Saynab Cige, Xakiima Caalin, Kaaha Shire iyo kuwo kale oo farabadan. Fannaaniinta iyo Jilayaasha kale ee ka qayb-qaatay Riwaayadaha Abwaan Sangub, waxaa ka mid ah; Maxamed Mooge, Dhegjar, Huryo, (dhammaantood Alle ha’u naxariistee), Sahra Axmed, Cabdi-dhuux, Meecaad Miigane iyo Saado Cali Warsame. Abwaan Sangub oo la-weydiiyay, qofka uu ugu jecelyahay marka laga hadlayo dhinaca Jillaanimada, wuxuu ku sheegay Fannaanada caanka ah ee Saado Cali Warsame “Cunaabi.” “Qofka wax jilla oo wax ii metela, waxaan ugu jeclaa Saado Cali, waayo, wax kasta waxay u samayn jirtay ama u odhan jirtay, sidaa ugu sheego.” Sidaa waxa yidhi Sangub oo sharaxaad ka bixiyay sababta Saado Cali uu ku jeclaaday. Maxamuud Cabdillaahi Ciise “Sangub,” waxaa lagu tilmaamaa ragga ugu horeeya marka laga hadlayo samaynta riwaayadaha, haddaba isaga oo ka jawaab celinaya aragtida uu ka qabo cidda ugu riwaayadaha badan, wuxuu yidhi: “Anigu waxaan ahay, qofka ugu riwaayadaha badan.” Markii uu dagaalku ka dhacay dalka Soomaaliya, waxaa bilaabmay burbur ku yimi dhammaan dhinacyada nolosha bulshada, iyo baro-kac weyn oo dadku ugu hayaameen, dhinaca Waddamada Jaarka ah, gaar ahaan Waddanka Kenya. Sangub, wakhtigaa wuxuu sameeyay Riwaayado badan oo uu kaga hadlayo dhibaatooyinkii ay keeneen dagaaladii sokeeye. Riwaayadahaas, waxaa ka mid ahaa: “Ummad wada qooqan, wax u qaybi leeyahay,” “Halkii qoontu ku taallay dhakhtarkii qalliwaa,” “Qabyo,” “Ambiil ma leh.” Heesaha, sida gaarka ah dadbadani ugu xusuusto, waxaa ka mid ah: “Yaan Ismiit,” iyo “Nin ku siray wax kuu sheeg,” oo labaduba yihiin kuwo Waddani ah oo si guud uga hadlaya, dhibaatooyinka gumaysigu ku hayo bulsho-madowda Afrika, gaar ahaanna “Yaan Ismiit,” waa hees caan ah oo ay qaadaan fannaaniinta Waaberi, kana hadlaysa qadiyadii Gumaysigu ku hayay Waddamada Rodisia iyo Koonfurta Afrika. Abwaan Sangub markii dagaaladu dhaceen, wuxuu u qaxay dalka Kenya, halkaas oo uu muddo ku noolaa Xero Qaxooti oo ku taallaa duleedka magaalo-xeebeedka Mombassa oo lagu magacaabo “Utanga,” halkaas oo uu markii dambe uga sii tacabiray dhinaca Waddanka Maraykanka. Kuma yarayn qaxar, werwer iyo walbahaarna waa u dheeraa, wixii ka qabsaday Qaxootinimada oo ahayd mid ku cusub oo hore aanu u arag. Abwaanku, isaga oo tilmaamo ka bixinaya mahadhooyinkii ka soo maray, hayaankii dheeraa ee qaxootiga, wuxuu yidhi: “Anigu weligay hore umaan gaajoon, mana dhibaatoon, Calanka uma halgamin, la ima dilin, laymana ciilin, Calan rag ku soo daaleen ayaan gedaanka qabsaday, kadibna waa la ii sacabo tumay oo Sangubow baa la igu yidhi, aniga oo ilmo xalay dhashay la mid ah, ayaan qaxay. Weligay kumaan fekerin, Soomaaliya waad ka tegaysaa, Kenya ayan tegay, waxaan watay caruur badan, waxaana la kulmay gaajo badan iyo dhibaatooyin aan la koobi karin.” Abwaanku, wuxuu sheekada ka bilaabay markii uu gaadhay magaalada “Dika” oo u dhow Caasimadda Kenya ee Nairobi, isaga oo sheegay waxyaabihii uu halkaa kala kulmay inuu ka tiriyay Jiifto uu u bixiyay “Derin iyo Go’ wadato,” isaga oo ka hadlayana wuxuu yidhi; “Markii aanu tagnay xeradaa, waxaa dhacday in qofkii shirikaan haysa lagu qabsado oo la yidhi, xageed ka keentay oo qofkii Derin sitay lagu qabsaday, ayaan sameeyay Jiiftadan.” Jiiftadii uu Sangub tiriyay, waxaa erayadeedii ka mid aha: “Kud ka deg oo qanjo u durug derin iyo go’ wadatada, Jirikaan dawerisada taandhada ku dooddada waaba looga sii daray. Soddon gu’ iyo dogaad diraac iyo Jiilaalkeed, dalkan aynu leenahay dad aqoon leh baa yidhi, dembiyadii ka dhici jiray duhur galay dharaar qudha, xisaabihii la daabacay daalacan tan baa dheer.” Jiiftadan oo ah mid aad u dheer, waxa kale oo ka mid ahaa tuduc uu kaga hadlayo, sida aan cidina dan uga lahayn Shacbiga magacooda lagu adeeganayo, iyada oo qof waliba odhanayo; ummadda Soomaaliyeed!! “Sa’dan la isku wada-dagay ee magac duleedka ah, Nin waliba dadkiisii iyo duulqabiil ah soo tubay, ku led daarburburyahan dabalayha fadhiistoo debedaha u soo baxa nooga dhigaya derejada waxay dood wadaagaan, kii dilay Ninkii yidhi waan ladnahaye iga daa.”
intaa waxa dheerayd in dhulka soomaalida aay suugaantu meel wax ku ool leh aay ugu taalay. Soomaalidu suugaanta waxay u isticmaali jireen waxyaalo kala duwan oo aay ka mid ahayd heeso, gabyo, hees hawleedyo iyo wixii la mida
Ilaahay ha unaxariisto abwaan Sangub.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Maxmuud_Sangub&oldid=204185"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 Luuliyo 2020, marka ee eheed 00:29.